Ugu yaraan 15 qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ay Al-Shabaab ka geysatay gudaha Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan 15 qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ay Al-Shabaab ka geysatay gudaha Muqdisho
April 9, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Ugu yaraan 15 qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ay Al-Shabaab ka geysatay gudaha Muqdisho. [Xigashada Sawirka: Reuters]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dilay Muqdisho maanta oo Axad ah kadib markii qarax gaari lala eegtay saraakiil sare oo ka ambabaxayay saldhig milatari, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka amniga iyo caafimaadka katirsan.
Intooda badan dadka geeriyooday kuna dhaawacmay qaraxa ayaa ahaa shacab sababtoo ah qaraxa gaariga ayaa burburiyay gaari bus ah oo ay saanaayeen dad shacab ah, sida ay ilo-wareedku sheegeen.
In ka badan 30 qof ayaa ku dhaawacmay qaraxa, sida ay Puntland Mirror khadka taleefoonka ugu sheegeen saraakiil caafimaad oo jooga Muqdisho.
Ururka hubaysan ee Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas, sida ay ku warantay idacada Al-Shabaab ee Al-andalus.
February 1, 2017 Diktoor Dufle oo katirsan xildhibaanada aqalka sare oo ka badbaaday qarax lala beegsaday gaarigiisa